Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:43 PM0comments
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 1:28 PM0comments
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:08 PM0comments
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:55 AM0comments
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:29 AM0comments
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:03 PM0comments
Civil Society ကို ပထမဆုံးတင်ပြသူ ကောင်းမြတ်သူ (မူဝါဒရေးရာဌန)
ယခုတစ်လော မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးလောကတွင် NGO သံတ ညံညံ ကြားနေရသည်။ ဟိုနားကြည့် လည်း NGO ထောင်မည်၊ ဒီနားကြည့်လည်း ဖေါင်ဒေးရှင်းထောင်မည် လုပ်နေကြ၏။ Civil Society များက တိုင်း ပြည်အတွက် အလွန် အရေးကြီးသည် စသည်ဖြင့်တို့ ပါဝင်သည့် အတွေးအ ခေါ်များလွှမ်းမိုးသော နေ့ရက်များဟု ဆို နိုင်ပေသည်။ နေ့ရက် များဟု သုံးနှုံးလိုက် ရခြင်းကတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်း လည်း ထိုအသံများ ပြောက်သွားနိုင် သောကြောင့်ဖြစ် ပေသည်။ Civil Society ဆိုသည့် စကားလုံးသည် ၁၉၈၀ ကာလများတွင် အမေရိက ၌ စတင်ခေတ် စားခဲ့သော်လည်း မြန်မာပြည် သို့ ယခုမှ ရောက်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။
လူမှု အဖွဲ့အစည်းများကို ဒီမိုကရေစီ ရေးအတွက် အရေးကြီး သာ အရင်း အမြစ် များအဖြစ် ပညာရှင်မျိုးစုံတို့ ကတင်ပြလာကြသည်လည်းရှိပါသည်။ မြန်မာပြည် တွင်တော့ လူမှုအဖွဲ့စည်းများ ဆိုင်ရာ အယူအဆသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက် ကာလများ အတွင်း သိသိသာသာ ဖြစ်ထွန်းလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ လွတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးဟုလည်း နာမည်ပေး ကြသည်။ အမှန်တော့ လွတ်တော်ပြင်ပ နိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ ၂၀၁၀ သပိတ်မှောက် လမ်းစဉ် ကိုထောက်ခံမှု ပေးရန် NLD နှင့် ၎င်း လိုလားသူများ၏ ရသေ့စိတ်ဖြေ စကားလုံး မျှသာဖြစ်၏။
လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများသည် အာဏာရှင် နိုင်ငံများတွင် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးကို သော်၎င်း ၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ များတွင် အစိုးရ အဏာပိုင်များနှင့် ပြည်သူအကြား ဒီမိုကရေစီထိန်းသိမ်းရေးအတွက် တွင်သော် ၎င်း အလွန်အသုံးတဲ့သော ကိရိယာ အဖြစ် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများအား တော်လှန် ရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ်၎င်း ၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သော်၎င်း တိုက်ရိုက် အသုံးချ မည်ဆိုလျှင် လွဲမှားသော ရလဒ်များ ပေါ်ထွက်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ဆိုလျှင် -- စာရေးသူ ၏ အသိမိတ်ဆွေတစ်ဦးက သူတို့ ပိုက်ဆံရှိသော လူများစုစည်း၍ NGO တစ်ခုထူထောင်ရန်အတွက် ပြည်ထဲရေးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း၊ ပြည်ထဲရေး မှ မှတ်ပုံ တင်ခြင်းကိုခွင့်မပြုသဖြင့် မလုပ်ရဲသေးကြောင်း တင်ပြလာကြ၏။ သူတို့ဆိုလိုချင်သည်မှာ တော့ယခု တည်ထောင်နေကြသော NGO များမှာတရားမ၀င်လှုပ်ရှားနေကြခြင်းဖြစ်၍ အစိုးရနှင့်လည်း အတိုက်အခံ ဖြစ်နေကြပြီး အကယ်၍ သာသူတို့ အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့် မရပဲ NGO လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်လျှင် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အသင်းဟု သက်ဆိုင်ရာမှ ထင်မြင်၍ စစ်ဆေးခြင်း ဖမ်းဆီးခြင်းများဖြစ်လာမည်ကို မလိုလားကြောင်းသာလျှင်ဖြစ်၏။
စာရေးသူအနေဖြင့် ထိုသူငယ်ချင်းများ၏ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို သိ၏။ ၎င်းတို့သည် ပညာတတ် ပိုက်ဆံရှိ သူများဖြစ်ပြီး ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်လည်း အစိုးရနှင့် ခပ်ကင်းကင်းနေ၍ ချမ်းသာသူများဖြစ်၏။ သူတို့အနေဖြင့် ဘ၀တွင် အေးအေးဆေးနေလာသူများဖြစ်ပြီး ဘ၀၏ နေ၀င်ချိန်များတွင်လည်း ခပ်အေး အေးသာနေလို ပြီး လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက် လိုသူများဖြစ်၏။ NGO လုပ်ငန်းနှင့် Political Activist လုပ်ငန်းများကို ကွဲပြားစွာဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့လိုလေပြီ။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တိုးတက်လာရေး အတွက် လိုအပ်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်းများ တိုးတက် စေရေး၊ ကုန်ထုပ်လုပ်မှုများတိုးတက်စေရေး၊ တိုင်းပြည်၏ GDP ၊ လူတစ်ဦးခြင်းစီတို့၏ ၀င်ငွေ စသည်ဖြင့်တို့ တိုးတက်လာစေရေး လုပ်ငန်းများ မှာ အစိုးရမဟုတ်သော Civil Society အဖွဲ့အစည်း များနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများမဟုတ်ပါချေ။ NGO အချို့ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် NLD မှလူငယ် အချို့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သီတင်းပတ် အနည်းငယ်မျှဖြစ်သော သင်တန်းများကို တက်ရောက်စေ၏။ မျိုးဆက် သစ်ဆိုသည်မှာ ဤသို့မွေးမြူ၍ မရကြောင်း စာရေးသူမှ ဆွေးနွေးခဲ့ဘူး၏။ ထိုအခါ လူတစ်ယောက်က NLD ၏ စာဖတ်ဝိုင်းများဖွဲ့ခြင်း၊ လူငယ်များအား ပြည်ပ NGO များအကူအညီဖြင့် သင်တန်းများပေးခြင်းမှာ ပါတီ၏ အနာဂတ်အတွက် မျိုးဆက်သစ်များ ပေါ်ပေါက်လာရေး တွင်အကောင်း ဆုံးဖြစ်ကြောင်း စာရေးသူမှာ ဗဟုသုတနည်း သူဖြစ်၍ NLD ၏ လုပ်ရပ်ကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေကြောင်း ပြောလေသည်။ ထိုအခါ စာရေးသူက ထိုသို့ဆိုပါလျှင် စင်္ကာပူတွင် တက္ကသိုလ်တက်နေသော ခင်ဗျား၏ သားသမီးများကို ကျောင်းထုတ်၊ NLD ကစာဖတ်ဝိုင်းကိုပို့ပြီး NGO ကဖွင့်တဲ့သင်တန်းတွေ တက်ခိုင်းပါလားဟုပြောလိုက် တော့ ပါးစပ်ပိတ်သွား၏။
အမေရိကန်မှ ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်သော Sanctions များတွင်စီပွားရေးလုပ်ငန်းများသာမကပဲလူမှု အထောက် အ ကူပြုလုပ်ငန်းများ ၀င်ရောက်လာစေရေးကလည်း ရှေ့တန်းမှပါဝင်နေ၏။ အမေရိကန်အပါ အ၀င် ဥရောပ မှ အထောက်အ ပံ့များဝင်လာလျှင် တိုင်းပြည် စီးပွားရေး အတွက် တိုက်ရိုက်အကျိုးပြုမည်ဟု ထင်ယောင်မှားနေသူများလည်း ရှိကြပါသည်။ အမှန်တော့ ပြည်ပ အကူအညီများဟုဆိုရာတွင် စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ ၊ နည်းပညာများ ကိုဘယ်တော့မှပေးလေ့မရှိပေ။ လေ့လာမှုများ အရ ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ ၏ အလှုငွေများသည် နောက်ဆုံးတွင် လှုဒန်းငွေ၏ ၂၀ % ခန့်သာ ရောက်ရှိကြောင်း တွက်ချက်သိရှိရ၏။ စရိတ်စက များမှာ သက်ဆိုင်ရာ NGO အရာရှိများ၏ လစာ ငွေ၊ ခရီးစရိတ် နှင့် သုတေသန လုပ်ငန်း များ တွင် ၈၀ % ခန့်သုံးစွဲ ကြလေ၏။ သတင်းထဲတွင်ပါသော နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံမှ ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ လှုလိုက် သည်ဟုဆိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာ အလှုခံ မည့်သူလက်ထဲသို့ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ သာ ရောက်သည် ဟု မှတ်ယူရပေမည်။
တိုင်းပြည်တိုးတက်စေလိုလျှင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ အားလုံး အမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ်၍ ကာယ၊ ဥာဏ ပြည်သူများအားလုံး သေအောင်အလုပ်လုပ်ပါမှ အမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်မည့် အရာဖြစ်ပါ၏။ တိုင်းပြည်၏ GDP နှင့်တစ်ဦးခြင်းဝင်ငွေ တိုးတက်ရေးအတွက် NGO များက တိုက်ရိုက်အားဖြင့် မတတ်နိုင်ပါချေ။
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများဖြစ်သော လောနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် ဗီယမ်နမ် နိုင်ငံတို့၏ တစ်ဦးခြင်းဝင် ငွေများသည် မြန်မာနိုင်ငံထက်မြင့်မားနေပေ၏။ တိုင်းပြည်၏ အရေးကြီးသော အချိန်တွင် အတိုက်အခံနိုင် ငံရေးလုပ်သူများ အနေဖြင့် ယခုထက် အဆင့်မြင့်မားကြဖို့လိုလေပြီ။ တိုင်းပြည်အတွက် ကယ်တင်ရှင် ဟု ပြည်သူများက အထင်ရောက်နေသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူများက သင်္ကြန်သံချပ် ၀ိုင်း အဆင့် လောက်သာလျှင်ဖြစ်နေပြန်၏။ လူထုခေါင်းဆောင်ပါတီကြီးက စကားလုံးတစ်လုံး အတင်မခံနိုင်၍ လွှတ် တော်ထဲဝင်ရောက်ရေးနှောင့်နှေးနေ၏။ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှုများ ကို တားမြစ်နေ၏။ နိုင်ငံတကာဖိအား ကြောင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ပြောင်းလဲလာသည် (သို့) ပြောင်းလဲလာမည်ဟု အထင်ရောက်နေ၏။ အမှန် တော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဖြင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရပေါ်ပေါက်လာသည်မှာ ထိုသို့ပေါ်ပေါက်မလာ ရန်ဖိ အားပေးနေသည့်ကြားမှ ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လေ၏။
ထိုင်း နိုင်ငံက တစ်ဦးခြင်းဝင်ငွေ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၉၀၀၀၊လော နိုင်ငံက ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၊ ကမ္ဘောဒီးယားက ဒေါ်လာ ၂၁၀၀၊ ဗီယမ်နမ်က ဒေါ်လာ ၃၁၀၀ ဖြစ်၍ မြန်မာပြည်က တစ်ဦးခြင်း တစ်နှစ် ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၃၀၀ ခန့်ဖြစ်၏၊ လက်ရှိတွင် GDP တိုးတက်မှုနှုံးက ၅ % ကျော်ရှိ၏၊ မြန်မာ၏ GDP က တစ်နှစ် ဘီလီယံ ၈၀ ကျော်ဖြစ်၏။ မြန်မာနှင့်လူဦးရေ မတိမ်းမယိမ်းရှိသော ထိုင်းနိုင်ငံ GDP က တစ်နှစ်လျှင် ဘီလီယံ ၆၀၀ ကျော်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်လျှင် စီးပွားတိုးတက်မှုနှုံး ၁၀ % ခန့်ရှိမှ သာ နောက် အနှစ် ၃၀ ခန့်ကြာ လျှင် ယခု ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု နီးပါးရှိနိုင်ပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည် မ-ဆ-လ ခေတ် တွင် LDC ခေါ် ကမ္ဘာ့ အဆင်းရဲဆုံး တိုင်းပြည်များ စာရင်းတွင် ပါသွားစဉ်က မ-ဆ-လ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက ပြောသည်မှာ တိုင်းပြည် LDC ဖြစ်သွားလို့ ခင်ဗျားတို့ နေတဲ့အိမ်ပေါ်က ဆင်းပေးလိုက်ရလို့ လားဟု အသိဥာဏ်နဲစွာပြောသည်ကို ကြားရဖူး၏။
ယခုလည်း NLD အပါအ၀င် NLD လိုလားသူများက ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေး နှင့် အတူပေါ်ပေါက်လာ သောလွှတ်တော် ကိုဘာမှ အလုပ်မဖြစ်ပါ။ လွှတ်တော်ပေါ်လာပြီးမှ ကုန်ဈေးနှုံးတွေလည်း မကျသေးပါ။ ပြည်သူတွေလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲဟု တွင်တွင်ပြော၍ တော်လှန်ရေးကြီး မပြီးဆုံးသေးကြောင်းတိုက်ပွဲခေါ် လျှက်ရှိသေး၏။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ဘာမျှမလုပ်ပဲ ၎င်းတို့ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များ ကို အကောင်အထည်ဖေါ် နေကြ၏။ ၎င်းတို့စိတ်တိုင်းကျ အခြေခံဥပဒေ မပေါ်မခြင်း တိုက်ပွဲခေါ်လျှက်ရှိ၏။ လွှတ်တော်တွင်းဝင်ရောက်ရေးမှာ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး၊ ကုန်ဈေးနှုံးကျဆင်းရေး မဟုတ်ပဲ အခြေခံဥပ ဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုသော နိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်ဖြစ်နေ၏။ စစ်တပ်အားဖိအားပေး၍ နောက်ကြောင်းပြန် နိုင်ငံရေးကို အသက်သွင်းနေ၏။
ဂျပန်မှ လျှော်ပစ်သော အကြွေးငွေ ဒေါ်လာ ၃.၇ ဘီလီယံအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဖို့ မစဉ်းစား၊ ပြည်ပအကူအညီဆိုလျှင် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုထိပါးသူအဖြစ် သတ်မှတ်နေလေပြီ။
၂၀၀၈ ထဲက ရေးထားခဲ့သော ကျမ်းကျိန်သည့် စာသားကို လွှတ်တော်တက်ခါနီးမှ ပြန်လည် သတိထားမိပါသည်ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက DVB ကိုပြောလေ၏။ အနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီတိုင်း ပြည်များတွင်တော့ ဦးဥာဏ်ဝင်း လို အမှားမျိုး လုပ်မိသူများ ရာထူးမှ နှုပ်ထွက်ပေး လေ့ရှိ၏။ ယခုလည်း ဦးဥာဏ်ဝင်း အပါအ၀င် NLD ရှိ ဥပဒေ အကြံပေးတစ်ဖွဲ့လုံးနှုပ်ထွက်သင့်ပေသည်။ စာသားကိုပဲပြင်တာပါ၊ ဥပဒေ တစ်ရပ်လုံးကို ပြင်တာမဟုတ် တဲ့အတွက် ကျမ်းကျိမ် စာသားများကိုပြင်ဆင်ပေးသင့်ပါသည်ဟု လွှဲမှားစွာ တောင်းဆို၏။ အသိအမှတ် ပြုသည်ဖြစ်စေ မပြုသည်ဖြစ်စေ အခြေခံဥပဒေ ဆိုသည် မှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖြင့် ပြင်သည်မှလွှဲ၍ စကားလုံးတစ်လုံးပင်ပြင်၍ မရ ဆိုသည်ကို NLD မှရှေ့နေများ နားလည်ဖို့ကောင်း၏။
သမ္မတ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒုတိယအကြိမ်တွေ့သည်ဆို၍ ပြည်သူများက ၀မ်းသာ စွာဖြင့် တိုင်း ရေးပြည်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးများ အဆင့်တက်လာပြီဟုထင်၏။ အမှန်တော့ သမ္မတ ကိုယ်တိုင် ဘာမျှမ တတ်နိုင်သော ကျမ်းကျိန်စာသားပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခြင်းမျှသာဖြစ်၏။
အခြေခံဥပဒေ အလိုအရ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြည်သူ တစ်ရာခိုင်နှုံး ၁% က လက်မခံကြောင်းတင်ပြလျှင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အား ပြန်လည် စီစစ် ပေးရ၏။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်တိုင်းတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ အင်အားမှာ ၁ % ထက် အများကြီးပို၏။ ၎င်း ပါတီမှ ပါတီဝင်များက ကန့်ကွက်လာ လျှင် တိုင်းရေးပြည်ရေး ခက်ခဲဖွယ်ဖြစ်၏။
NLD မှ အနိုင်ရသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံး လွှတ်တော် မတက်ရေးကို ကန့်ကွက်ပြော ဆိုသူတစ်ယောက်မှ မရှိ။ လက်ညိုးထောင်ခေါင်းညိမ့်များသာဖြစ်၏။ နိုင်ငံရေးလောက မှ အများစုက NLD ကျဆုံးခန်း၏ အစဟုပင်ပြောနေကြလေပြီ။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:02 AM 1 comments
.. ကောင်းမြတ်သူ (မူဝါဒရေးရာဌာန)
သံအမတ်ကြီးတစ်ယောက် သင်္ကြန်ပွဲတစ်ခုသို. တက်ရောက်သည်မှာ ထူးဆန်းသောကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါ ချေ။ ထူးဆန်းသွားရသည့် အကြောင်းရင်း က လန်ဒန်သင်္ကြန်ပွဲကို နိုင်ငံရေးလောက အတိုက်အခံများက ကျင်း ပ သောကြောင့်ဖြစ်ပါ၏။ ပြည်ပရှိအတိုက်အခံ များနှင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအကြား နားလည်မှု နှင့် ယုံ ကြည် မှု ပြသသည့် သဘောဖြစ်ပါတယ်လို.သံအမတ်ကြီးက တင်ပြခဲ့၏။
သင်္ကြန်ပွဲတော်သို. တက်ရောက်သောပရိသတ်များက ယခုနှစ်တွင် ထူးထူးကဲကဲများပြားလှသည်။ ပွဲတော်အား တာဝန်ယူကျင်းပပေးသော ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ ကလည်း ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် လပေါင်းများစွာ ပြင်ဆင်ခဲ့ရသည်။ ယခုနှစ်ပွဲတော်တွင် မြန်မာ့ရိုးရာ ဆိုင်းဝိုင်းဖြင့်လည်း ဧည့်ခံနိုင်ခဲ့သည်။ ကံအားလျှော်စွာဖြင့် အမေရိက မှ မြန်မာ လူမျိုး ဆိုင်းဆရာ ရွားစားကျော်တစ်ဦးကလည်း ရောက်ရှိလာသဖြင့် လန်ဒန် မြို့ကြီးတွင် ဆိုင်းသံ တညံညံဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သည်။
ဆိုင်းဝိုင်း အစုံ မှာလည်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တရ မှ အခါအခွင့်သင့်လျှင် မြန်မာ မူမြန်မာဟန်ကို တင် ပြရရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကထဲက မြန်မာနိုင်ငံမှ မှာ၍ ၀ယ်ယူထားခြင်း ဖြစ်၏။ ကံကောင်းစွာဖြင့် ရွာစားကျော်တစ်ဦးလည်း အချိန်ကိုက်ရောက်လာသည်နှင့် တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် ဆရာတော်စုဆောင်းထားသော ဆိုင်းဝိုင်းလည်း အသက်ဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ရသည်။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တရမှလည်း သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား ငြိမ်းချမ်း ရေးဆုတံဆိပ် ချီးမြင့် ခဲ့၏။ အမှန်တော့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တရသည်လည်း ပြည်ပ သာသနာပြုလုပ်ငန်း များနှင့် သက်ဆိုင်သော ပြည်ပသာသနာပြု ဆိုင်ရာ အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ဆက်ကပ်လေ့ရှိသည့် ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူတော်များနှင့် ထိုက်တန်သော ဆရာတော်တစ် ပါးဖြစ်ပါ၏။ ဆရာတော်ဦးဥတ္တရ အားလည်း နိုင်ငံတော်မှာ ပြည်ပ သာသနာပြုဆိုင်ရာဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူး များ ဆက်ကပ်ဖို့လိုလေပြီ။
သံအမတ်ကြီး ရောက်လာသည်ဟု ကြားသိရပါသဖြင့် ကျွန်ုပ် နိုင်ငံရေး သမားဖြစ်သူကလည်း သံ အမတ်ကြီး အား သွားရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါ၏။ ထိုသို.တွေ့ဆုံစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်၏ မြန်မာပြည်တွင်း ပြန်မည့် မူဝါဒအားလည်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလန် အပါအ၀င် နော်ဝေ နိုင်ငံများတွင် လည်း မြန်မာပြည်သူ ပြန်မည့် သူ များရှိပါကြောင်း။ သံအမတ်ကြီး အနေဖြင့် မည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်နိုင်မည်လည်း ဟု မေးမြန်းနိုင်ခဲ့ပါ သည်။
သံအမတ်ကြီးမှ မိမိအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လိုသူများအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေး မည်ဟု စာရေးသူအား ဂတိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလန်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအနေဖြင့် နော်ဝေ နှင့် ဆွီဒင် နိုင်ငံများအတွက် ပါ ပူးတွဲ တာဝန်ယူရသည်ဖြစ်၍။ ၎င်းနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သော မြန်မာများ ပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်လည်း အင်္ဂလန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှပင်တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရ မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
ထူးဆန်းသည်တစ်ခုလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ဘီဘီစီမှ ဌာနမှုးအပါဝင် ၀ိုင်းတော်သား ၁၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း သံအမတ်ကြီး အား သွားရောက်တွေ့ဆုံ၍ သတင်းယူခြင်း မပြုခြင်းဖြစ် ပါ၏။ ၎င်းတို့ အနေဖြင့် မမျှော်လင့်ပဲရုတ်တရက်တွေ့ဆုံလိုက်သည်ဖြစ်၍ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်သွားပုံရ ပေသည်။ အမှန်တော့ ဘီဘီစီ ဌာနမှုး အပါအ၀င် သတင်းသမားများ ၁၀ ယောက်ခန့်တို့ အနေဖြင့် သတင်း ရှိရာနေရာတွင် သတင်း မယူနိုင်ခြင်းက တစ်စုံတစ်ရာလွဲချော် မှုတစ်ခုသာဖြစ်၏။
သံရုံး နှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရသည်မှာ ယခုသင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ သံအမတ်ကြီးလာရောက်ခြင်း သည် နေပြည်တော်သို့ ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာမှ အရေးယူ ခဲ့လျှင်လည်း ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ များ ထိုသို့ဖြစ်လာခဲ့လျှင် သမ္မကြီးသို့ ကျွန်ုပ်တို့ မှ အရေးဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း လည်း စာရေးသူမှ ဂတိပြုခဲ့ပါသည်။
သံအမတ်ကြီးဆိုသည်မှာ သမ္မတကြီးအားကိုယ်စားပြုလာရသူဖြစ်သည့် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နှင့် တွေ့ဆုံရသကဲ့သို့ သဘောထား ရပါသည်။ သံအမတ်ကြီးနှင့် ရုံးအဖွဲ့ မှ အတိုက်အခံမြန်မာ များအနေဖြင့် ပြည်တော်ပြန်ရေးအတွက် သံရုံးသို့ အချိန်မရွေး လာရောက်ဆက်သွယ် နိုင်ကြောင်း အထပ်ထပ် မှာကြားပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုလျှင် ပြည်ပ နိုင်ငံအသီးသီတွင် ရောက်ရှိနေကြသော အတိုင်အခံ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ ပြန်တော်ပြန်နိုင်ရေးသည်လည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ရပေမည်။ နယ်စပ်မှ အတိုက်အခံ တော်တော်များများကတော့ ရန်ကုန် နှင့်သွားလိုက်ပြန်လိုက် လုပ်နေကြလေပြီ။ ပြည်ပရှိမြန်မာ များ ပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေးသည်လည်း ငြိမ်းခြမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်သင့် ၏။ နိုင်ငံတကာ ရောက်မြန်မာများဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်အရေး ကြီးသော လူသား အရင်း အမြစ်များဖြစ်ကြ၏။ နှစ်ပေါင်း များစွာ နိုင်ငံတကာ အတွေ့ အကြုံရှိသော လူသားအရင်း အမြစ်များ မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရပေမည်။
ပြည်ပရောက်မြန်မာများ ပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေးမှာလည်း လွယ်မယောင်နှင့်ခက်သောကိစ္စဖြစ်လေ၏။ သမ္မတ အနေဖြင့် လွတ်တော်တွင် ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ပြန်လာရေးအတွက် မိန့်ခွန်းအဖြစ် သာ တင်ပြခြင်း ဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့တွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တစ်ခုဖြစ်မလာသေး၍ ဖြစ်ပါ၏။ မြန်မာ နိုင်ငံသား မဟုတ်တော့ သော အခြား နိုင်ငံသား ခံယူပြီးသူများအတွက် ဗီစာဖြင့် ၀င်ခွင့်ပြုနိုင် သော်လည်း TRAVEL DOCUMENT ကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံခြားသား မဟုတ်သူ မြန်မာများ အတွက် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေကြ၏။ အမှန်တော့ Travel Document ဆိုသည် မှာ ပြည်ပ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မဟုတ် သဖြင့် ထိုသူများအား မြန်မာ Passport ထုပ်ပေး၍ ရပါသည်။ ထုပ်ပေး၍ မရနိုင် ဟု ဆင်ခြေပေးလျှင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါ၏။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအရသော်၎င်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ များ အရသော်၎င်း Travel Document ကိုင်ဆောင် သူအား မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း မှာ မဖြစ်နိုင်ဟု ကောက်ချက်ဆွဲလျှင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါ၏။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ အတိုက်အခံများ ပြည်တော်ပြန်ရေးကိစ္စမှာ နိုင်ငံရေး ပြဿနာသာလျှင် ဖြစ်၍ လူဝင် မှု ကြီးကြပ်ရေး ပြဿနာအဖြစ် အတားအဆီး များ ပြုလုပ်မည်ဆိုလျှင် အခက်အခဲများ ရှိနေဦးမည်ဖြစ်၏။ အစိုးရနှင့် လွတ်တော်အနေဖြင့် မြန်မာအတိုက်အခံများ ပြည်တော်ပြန်ရေးကိစ္စတွင် Travel Document ကိုင်ဆောင်သူများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုပ်ပေး လိုက်လျှင် အကောင်းဆုံးနှင့် အလွယ်ကူ ဆုံး ပြေလည်မည်သာလျှင်ဖြစ်၏။ Travel Document ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင် အမြဲတန်း အခြေချနေထိုင်ခွင့်သာလျှင်ဖြစ်၏။ Travel Document ကိုင်ဆောင်သူများအား နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအ မှတ်ပြု၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မထုတ်ပေးခဲ့လျှင် ထိုသူများ အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားသား အဖြစ် ပြောင်းလဲခံယူ ၍ မြန်မာပြည်သို့ ဗီစာဖြင့် ၀င်ရောက်ရပေလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ထိုသူများ၏ လူသားအရင်းအမြစ်ကို လည်း ရယူ နိုင်ဖို့ ခက်ခဲသွားပေလိမ့်မည်။
အရေးကြီးသည့်ကိစ္စမှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတစ်ရပ်ကို တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အရသော် ၎င်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ဌာနတွင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်သော်၎င်း ရေးထွေး၍ မစဉ်းစား မိဖို.သာလျှင်ဖြစ်၏။ လက်နက်ကိုင် သူပုန်တစ်ဦး အတွက် သေဒဏ်ထိုက်သော အမှုကို ကျူးလွန်သည့် တိုင် အောင် နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်သည့် အတွက် သမ္မတက ပင်လက်ခံတွေ့ဆုံနိုင်သော် လည်း၊ အခြားသော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူ များအတွက် ကြတော့ လူဝင်မှုဥပဒေ အရ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မထုပ်ပေးနိုင်ပါ ဟူသောဆင်ခြေက ပြဿနာကိုဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းမဟုတ်နိုင်ချေ။ ထိုသူများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ထုပ်ပေးလိုက်ပါဟု သမ္မတက စာတစ်ကြောင်းရေးခဲ့လျှင် တိုတိုတုတ်တုတ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါ၏။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ၂၀၁၂ ဧပြီလ လန်ဒန်သင်္ကြန် တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ ကြိုဆိုလိုက်ပါ၏။ ပွဲတော်သို့ တက်ရောက်လာသော ဆန္ဒရင်းဖြစ်သည့် အစိုးရနှင့် မြန်မာအတိုက်အခံများ အကြားပြေလည်စေရေးဆိုသည့် ကိစ္စသည်လည်း အောင်မြင်ပါစေဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။ နောက်တွင် ကျင်းပ မည့် မြန်မာပွဲတော်များသို့လည်း သံအမတ်ကြီးနှင့် တကွ သံရုံးမိသားစု အားလုံးသို့ပါ မိမိတို့မှ မပျက်မကွက် ဖိတ်ကြားသွားမည်ဟုလည်း သိစေအပ်ပါသည်။ ထို့အတူ သံရုံး မှကျင်းပလေ့ရှိသော မြန်မာ့ ရိုးရာ အခမ်းအနားများသို့လည်း မြန်မာ အတိုက် အခံနိုင်ငံသားတို့အားဖိတ်ကြားရန် လိုအပ်မည်ဟု ထင်ပါ သည်။ နိုင်ငံရေး ပြဿ နာဆိုသည်မှာ သဘောမတူလျှင် ရန်သူ ဖြစ်တတ်သော်လည်း၊ သဘောတိုက်ဆိုင်ကြပါက အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများသာလျှင်ဖြစ်၏။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 7:48 AM0comments
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 9:36 AM0comments
မ.ဆ.လ ခောတ်တစ်လျှောက်လုံး အစိုးရဈေးဖြင့် စခန်းသွားခဲ့ကြသည်။ အစိုးရဈေးဆိုသည်မှာ နိုင်ငံပိုင် စက်ရုံ အလုပ်ရုံ (သို.) နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများမှာ ထုတ်လုပ်သောကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု များကို ရောင်း ချသည့် ဈေးနှုံး ဖြစ်ပါ၏။ စက်ရုံဈေး၊ အတွင်းဈေး၊ ထုတ်ဈေး၊ သမဆိုင် နှုံးထား၊ စသည်ဖြင့် အမည် အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ် ကြသည်လည်းရှိပါသည်။ ဆိုလိုရင်းကတော့ အစိုးရမှ သတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုံး သာလျှင် ဖြစ်၏။ အစိုးရဈေးနှုံးနှင့် ဆန့်ကျင် ဘက်ဈေးနှုံးကိုတော့ အပြင်ဈေး၊ မှောင်ခိုဈေး၊ ပေါက်ဈေး စသည်ဖြင့် ခေါ်ဆိုကြသည်။ အမှန်တကယ်ဆိုလို ရင်းကတော့ ဈေးကွက်ဝယ်လိုအား မှပြဌာန်းသော ပေါက်ဈေးနှုံးဖြစ်ပါ၏။
အစိုးရဈေး နှုံးဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်အား ဆူပူမှု များမဖြစ်စေပဲ တည်ငြိမ်စေရန် (သို့) မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ကြီးအောင်မြင်စေရန် ကျင့်သုံးသော ဈေးနှုံးဖြစ်ခဲ့သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ထုပ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ အထူး အရှုံးပေါ်ခဲ့ရပါသည်။ ထင်ရှားသော နှုံးထားများကို ပြရလျှင် ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ် လောင်စာဆီ ဈေးနှုံးများဖြစ်၏၊ လျှပ်စစ် မီတာခ၊ ရေမီတာခ၊ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုံးထားများတို့သည် အစိုးရ သတ်မှတ်သော ဈေးများဖြင့် ရာစုနှစ် ထက်ဝက်ကျော် စခန်းသွားခဲ့၏။
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို မကြည့်ပဲ အာဏာတည်မြဲရေးကိုသာ ကြည့်ခဲ့သဖြင့် လူတွေငြိမ်နေရင်ပြီးရော သဘောဖြင့် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ ကို အရှုံးခံ၍ ကုန်စည်များကို ဈေးသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုခဲ့သို့ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာ ကို အရှုံးခံ၍ ဈေးနှုံးသတ်မှတ်ခြင်းက စစ်အသုံးစရိတ်ထက်ပိုဆိုးပါသည်။ မ-ဆ-လ ခေတ်တစ် ခေတ်လုံး ဓါတ်ဆီတစ်ဂါလံ ၃ ကျပ် ၅၀ ပြားဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ထိုဈေးနှုံးကို တဖြည်းဖြည်း မြှင့်တင်လာ ခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အမှန်တကယ်ပေါက်ဈေးဖြစ်သော ၂၅၀၀ ကျပ်သို့တင်လိုက်သဖြင့် လူထုအုံ ကြွမှုဖြစ်ခဲ့ရသည်ကို မှတ်မိကြပါလိမ့်မည်။ ယခုကာ လတွင်တော့ ၃၅၀၀ ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင် နှုံးဖြင့် ရောင်း ဖို့လုပ်နေလေပြီ။
ဗဟိုဘဏ် ၏ နိုင်ငံခြား ငွေလဲနှုံးသစ်ပြဿနာ
ရာစုနှစ်ထက်ဝက်ကျော် ကျင့်သုံးလာခဲ့သော တစ်ဒေါ်လာပေါက်ဈေး ၆ ကျပ် ကျော်ကျော် ရှိသည့် နှုံးထားက ပြည်တွင်းရှိ အစိုးရ လုပ်ငန်း တွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရ၏။ ထိုပြဿနာများကို အစိုးရအ နေဖြင့် သင့်တော်သလိုဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။
ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းတစ်ခု ကို နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင် သွင်းသော အခါ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးချေရ၏။ သို့သော်ထိုငွေကြေးအား မြန်မာငွေဖြင့် မည်သို့ဖေါ်ပြမည် လဲဟူသော ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရပါသည်။ ဒေါ်လာတစ်သန်းတန်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း အတွက် မြန်မာငွေဖြင့် တင်ပြမည်ဆိုပါက တရားဝင်ဈေး နှင့်ဆိုလျှင် ဒေါ်လာ ၆ သန်းကျော်သာ ကုန်ကြမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုသို့ဆိုပါလျှင် အစိုးရထုတ်ကုန်တစ်ခု၏ တန်ဖိုးသည် မြန်မာငွေဖြင့်တွက် လျှင် အလွန်နဲပါးနေပြီး လက်တွေ့ တွင် အရှုံးပေါ်နေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် အစိုးရရုံးဌာန များတွင် စာရင်းရေးသွင်း သည့် အခါ ဒေါ်လာငွေအား မြန်မာငွေ မည်၍ မည်မျှ ဖြင့် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်၍ ရေးသွင်း ရမည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက်များပြဌာန်းလာရ၏။
ဥပမာတင်ပြရလျှင်-- ပြည်ပမှ မှာယူတင်သွင်းသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အကောက်ခွန်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ရာ တွင် အကောက်ခွန်ဥပဒေ အရ ကုန်ပစ္စည်းတန်ဘိုး၏ ၁၀% ကောက်ခံရမည်ဟုသော ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု အတွက် ကို အကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မည်ဆိုပါက တစ်ဒေါ်တာတန်သော ကုန်စည်တစ်ခုကို ၁၀ % အကောက်ခွန်သတ်မှတ်လျှင် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၆ ကျပ်ကျော် သာ အစိုးရသတ်မှတ်နှုံးထားရှိသဖြင့် အကောက်ခွန်ငွေ ပြား ၆၀ သာရရှိနိုင်ပေမည်။ ထိုအခါ လက်ရှိကာလ နှုံးထားများနှင့် ဆီလျှော်စေရန် အတွက် တစ်ဒေါ်လာတန် ကုန်စည် အတွက် ကျပ် ၄၀၀ (သို့) ၅၀၀ နှုံးဖြင့် သတ်မှတ်ပြဌန်းရမည်ဟူ သော ဌာနတွင်း တွက်ချက်မှု တန်ဖိုးများကို ပြဌာန်း လာရပြန်၏။ ထိုအခါ တစ်ဒေါ်လာတန်သော ကုန်စည် တစ်ခုတွက် ကျပ် ၄၀၀ ဖြင့် စည်းကြပ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်လျှင် ၁၀ % အတွက်ဆိုလျှင် ကျပ် ၄၀ အကောက်ခွန်နှုံးထားသတ်မှတ်သဖြင့် သင့်တော်သော နှုံးထားတစ်ရပ်ဖြစ်လာ၏။
ယခု ကာလတွင် ဗဟိုဘဏ်မှ ပြဌန်းသော တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၈၀၀ ကျော်နှုံးထား အသစ်ဝင်လာပြီဖြစ် သဖြင့် အစိုးရလုပ်ငန်းများတွင် ပြဿများဖြင့်ရင်ဆိုင်ရပေမည်။ ယခုပင်လျှင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ် ငန်း များတွင် အခက်အခဲများရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်၏။ ပထမ အခက်အခဲမှာ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သော ငွေလဲလှယ်နှုံးအရ အကောက်ခွန်နှုံးထားများ တိုးမြင့် လာသည်ဖြစ်၍ ကုန်စည်များ ဈေးကြီးပြီး ကုန်သယ် များ အစပိုင်းတွင် အရှုံးပေါ်ပေလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းတွင်တော့ ပြည်ပကုန်စည်များ ဈေးတက်လာဖို့ရှိ၏။ ဒုတိယ ပြဿနာကတော့ ဗဟိုဘဏ်ဈေးဖွင့်ကြိမ်ကို စောင့်ဆိုင်းနေရသည်ဖြစ်၍ အချိန်ကြာမြင့်ခြင်းဖြစ် ပါ၏။ (ထိုပြဿနာကိုတော့ ပြီးခဲ့သည့်နေ့က ဈေးပိတ်ချိန်နှုံးထားဖြင့် နောက်တစ်နေ့တွင် ကောက်ခံလိုက်လျှင် ပြေလည်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
သို့အတွက် မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းတွင် အထွေထွေကုန်ဈေးနှုံးကြီးမြင့်မှုများပေါ်ပေါက်နိုင်ပြီး အစိုးရလုပ်ငန်း များအားလုံးနီးပါးလည်း အရှုံးပေါ်မည်ဟုခန့်မှန်းရပေသည်။ အစိုးရ ပိုင် လုပ်ငန်းများအတွက် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအတွက် အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်ကို ကျပ် ၈၀၀ ကျော်ဖြင့် စာရင်း တင်သွင်းမည်ဆိုလျှင် ယခင်က အမြတ် ပြနေသောလုပ်ငန်းများ အရှုံးပေါ်ပေလိမ့်မည်။ အရှုံးပေါ်ခဲ့လျှင် လိမ်ငြာမနေပဲ အစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းများ ပြင်ပသို့ မြန်မြန်ထုတ်ရောင်းသည့်နည်းကို ကျင့်သုံးလျှင် သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အထူး သဖြင့်တော့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနများ၊ သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန၊ မီးရထားဌာန၊ များတွင် အထူးအရှုံးပြဖွယ်ရှိပါသည်။ တိုင်းပြည်၏ ရသုံး ဘဏ္ဍာ ခွဲဝေမှုများတွင် အစမှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲလိုက်သော ငွေကြေးနှုံးထား အသစ်အရတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အခွန်ငွေတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါ၏။ (ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ သမ၀ါယမ ၀န်ကြီးဌာနကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်)
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အစိုးရဈေး ဟုသော နှုံးထားတစ်ရပ်ကို တော့ မြန်မာပြည်တွင် ဖယ်ရှားသင့်ပြီဖြစ်ပါ သည်။ အစိုးရနှုံးထားဆိုသည်မှာ ဆိုရှယ်လစ် အာဏာရှင် စနစ်က အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် တီထွင် ထားသော စနစ်တစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်ပါ၏။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် အစိုးရမှ သတ်မှတ်ပေးသော အစိုးရဈေး ဟူ၍ မရှိတော့ပါ။ မြန်မာပြည်တွင် ဈေးကွက် စီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးသည်ဖြစ်၍ ဈေးကွက် မှ ပြဌာန်းသော ဈေးနှုံးကိုသာလျှင် လေးစားလိုက်နာရန် အကြောင်းရှိပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဗဟိုဘဏ်၏ ငွေလှယ်နှုံးထားအသစ်သည် တိုင်းပြည်၏ ပဂတိ အခြေအနေကို ထင်ဟတ်သည်ဖြစ်၍ အထူးကြိုဆိုလိုက်ပြီး။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အာဏာရှင် ခေတ်တစ်ခေတ်လုံး တည်ရှိခဲ့သော အစိုးရ နှုံးထား တစ်ခုပြောက်သွားမည် ဆိုလျှင် ပိုမို၍ သင့်တော်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည် အတွက် တော့ ငွေကြေးတန်ဖိုးပြောင်းလဲခြင်း၏ ဒဏ်ကို ခံစားရပေဦးမည်။
မြန်မာပြည်၏ ငွေကြေးဈေးကွက်တည်ငြိမ်လာလျှင် ဘဏ် အပ်ငွေများ နှင့် အစိုးရ ငွေတိုက်စာချုပ် ၀ယ်ယူ စု ဆောင်းမှုများ များပြားလာနိုင်၏။ လာမည့် ၁၀ စုနှစ် ကာလများ အတွင်း အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ် များ ရောင်းချမှုများ ကြောင့် တိုင်းပြည်အတွက် ဘဏ္ဍာရေးပြဿနာများလည်း ကြီးမားစွာရှိလာနိုင်သည်။ ကမ္ဘာ့ စီးပွား ပျက်ကပ်ကြောင့် အမေရိကနှင် ဥရောပနိုင်ငံ အသီးသီးတွင် စုဆောင်းငွေ အပေါ် အတိုးနှုံးထား မှာ ၄ % ခန့်သာရှိသော်လည်း မြန်မာပြည်၏ အတိုးနှုံးမှာ ၁၀ % ခန့်ရှိသဖြင့် ပြည်ပမှစုဆောင်းငွေများ တိတ်တဆိတ် ၀င်ရောက်လာလျှင် လာမည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း အစိုးရအနေဖြင့် အရှုံးပေါ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ ဘဏ်အတိုးနှုံးထား များကိုလည်း ၅ % လောက်အထိလျှောချထားဖို့လိုပေသည်။ ဘဏ်အတိုးနှုံးများကြီးမြင့်သည်နှင့် အညီ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု စရိတ်ကြီးမြင့်သည်ဖြစ်၍ တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုံးနှေးကွေးသည်လည်းရှိလာ နိုင်ပေသည်။
ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် တော့ အထူးတွက်ခြေကိုက်သော ဈေးနှုံးအသစ်ကိုရရှိပေမည်။ ယခင်က ပြည်ပမှ ယူဆောင်လာသောငွေကြေးအတွက် ပေါက်ဈေးထက် လျှော့၍ မြန်မာကျပ်ငွေကို လဲလှယ် ရသည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ တရားဝင်ဈေး နှုံးအသစ်က ပိုရ သောကြောင့် ပြည်ပ ရင်းနှီး မှုများ ပိုမိုဝင်ရောက်လာဖွယ်ရှိပါသည်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင် ငွေကြေးနှင့် ကုန်စည်များအတွက် အစိုးရဈေး နှင့် မှောင်ခိုဈေး ဟူသော ဈေးကွက် နှစ်ခုရှိနေသရွေ့ မည်သို့ မျှတိုးတက်နိုင်မည်မဟုတ်သဖြင့် အစိုးရဈေးဟူသော နှုံးထား တစ်ရပ်အား အစိုးရမင်းများကိုတိုင် တိုက်ဖျက်ပါမှ တိုင်းပြည် စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် NLD အစိုးရအား တင်ပြလိုက်ရပေသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 8:47 AM0comments